ADO.NET in C# (part 1) | our notes for our youngers
Filed under: ADO in Window Application — Tags: .NET, ADO.NET, C#, dataset, programming — sevenlamp @ 11:15 AM
ကျွန်တော်တို့တွေ database ထဲက record တွေကို User Interface မှာ ရှိတဲ့ datagrid လို၊ textbox လို control တွေမှာ ပြဖို့ ပြင်ဖို့ ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်။ C# window application မှာ database နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း ၂ မျိုး သုံးလို့ရပါတယ်။ နံပါတ် ၁ နည်းလမ်းကတော့ data ပြမယ့် UI control နဲ့ data ရှိတဲ့ databaseကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒီလိုဆောင်ရွက်နိင်ဖို့အတွက် SQL DataSource object ကို သုံးရပါတယ်။ နံပါတ် ၂ နည်းလမ်းကတော့ database table တွေထဲက data တွေကို ကျွန်တော်တို့ program ရဲ့ memory ပေါ်မှာ dataset တွေ အနေနဲ့ သိမ်းထားပြီး၊ အဲ့ဒီ dataset တွေနဲ့ UI controls တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တဆင့်ခံ ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက်တော့ OBJECT DataSource နဲ့ dataset တို့ကို သုံးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ dataset တဆင့်ခံပြီး object datasource နဲ့ သုံးရတာကို ပိုပြီးကြိုက်တယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ data အသွင်းအထုတ် transaction တစ်ခုစီအတွက် database ကို အမြဲသွားနေစရာမလိုဘူး။ dataset table ထဲမှာပဲ လုပ်လို့ရတယ်။ အားလုံးပြီးလို့ စိတ်ကျေနပ်ပြီဆိုမှ database ထဲကို တစ်ကြိမ်ထဲ update လုပ်နိုင်တယ်။ နောက်ပိုပြီးကောင်းတာက quary တွေက dataset တစ်နေရာထဲမှာ စုပြီး ရေးထားတာကြောင့် လိုအပ်လို့ modify လုပ်ချင်တဲ့ အခါမှာ လွယ်ကူတယ်။ sql datasource ကိုသုံးရင် data ပြမယ့်နေရာ ၃ နေရာရှိရင် quary ကို သုံးနေရာလုံးမှာ သုံးခါရေးရမှာဗျ။ ဒါဆို ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း သုံးနေရာလုံးမှာ လိုက်ပြင်ရလိမ့်မယ်။ ချိတ်ဆက်ပုံ ၂မျိုးလုံးကို ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်၊ ပထမဆုံး database ထဲမှာ table လေးတစ်ခုအရင် သွားဆောက်လိုက်ပါဦး။
Field name Data Type AllowNull
CategoryID int false PrimaryKey (auto increment)
CategoryName varchar(50) true
Description varchar(500) true
Status bit true Default vale – true
hi brother i m so thank u for this…i waithing it…very thank:)and waiting your next lesson
Comment by arkar — September 13, 2009 @ 9:16 PM
I wonder howaprogram and database are connected.
Now I know it’s justapiece of cake.
Thank alot bro.
If you get time can you explain how can I write stored procedures how it
Comment by kevin — September 14, 2009 @ 12:22 PM
Comment by sevenlamp — September 14, 2009 @ 1:32 PM
You can goalong way!
Comment by Mg Thu — January 14, 2012 @ 4:19 PM